नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पढ्दा पढ्दै धरधरी रुनुपर्ने एउटा अत्यन्त दु:खद समाचार : हाम्रो देशमा पनि सरकार छ र ??
पढ्दा पढ्दै धरधरी रुनुपर्ने एउटा अत्यन्त दु:खद समाचार : हाम्रो देशमा पनि सरकार छ र ??
एउटा छोरो साउदीमा मर्यो, लाश ल्याउन सक्या छैन, अर्को छोरो बन्दुकले हानेर मारिदिए !
बलिन्द्रधारा आसुँ पोख्दै आमा बाबु भन्छन - एक हल गोरु छन, बेचेर लाश ल्याउँला भन्या गोरु बिक्दैनन !
कथित जनयुद्धको नाइके प्रधानमन्त्री भएको देशमा शायद यस्तै यस्तै हुन्छ होला !
धनकुटा नगरपालिका १३ का ६५ वर्षीय कमल भण्डारीको छोरा साउदी अरबमा मरेको एक महिना भयो । छोराो लाश ल्याउन खर्च जुटाउन घरको हलगोरु बेच्न खोज्दा एक महिना भइ सक्यो अझै विकेको छैन । रोजगारीका लागि गएको जेठ महिनामा साउदी जानुभएका भण्डारीका २१ वर्षीय छोरा सुशील भण्डारीको असोज १६ गते मध्यरातमा गाडीले किचेर मृत्यु भएको अपुष्ट खवर आएको छ । छोराको मृत्यू भएको यकिन भएपनि कुन मेनपावरबाट गएको हो र लास कसरी ल्याउने भन्ने वुझ्नका लागि आवश्यक खर्च नहुँदा लास ल्याउने समेत अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन । आर्थिक अवस्था दयनीय रहेका भण्डारी
परिवारमा छोरा मारिएको शोक त छँदैछ यसका अतिरिक्त छोराको मृत्यूको कारण वुझ्नलाई राजाधनीसम्म आउन समेत आर्थिक हैसियत कमजोर भएपछि टाढाको कुरा भएको छ ।
सामान्य फुस्को छानो त्यसमाथि त्यो पनि चुहिने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रका अनुसार घरको छानो त जेनतेन टालिएला भौतिक वस्तुले तर भण्डारी परिवारमा आईलागेको पीडा केले टालिएला त्यो भने उहाँहरुका लागि टाढाको विषय वनेको छ ।